I-ARDS (isiQinisekiso esiQinisekileyo sokuPhefumla ngesi sifo)
Yintoni isifo sokuphefumla esixhalabisayo (i-ARDS)?
I-ARDS luhlobo lokusilela okuphefumlayo okubangelwa kukwakheka kolwelo kwimiphunga yakho. Ulwelo luthintela imiphunga yakho ekugcwaliseni ioksijini. Igazi lakho alinakho ukufumana ioksijini eliyifunayo emzimbeni wakho. Izixhobo ezinjengezintso zakho zingavalwa ngenxa yokungabikho kweoksijini. I-ARDS isongela ubomi kwaye kufuneka unyango kwangoko.
Yintoni ebangela i-ARDS?
Isifo, njenge-pneumonia, sepsis (usulelo lwegazi), okanye i-pancreatitis
Ukwenzakala esifubeni okanye kwinxalenye yengqondo elawula ukuphefumla, okanye ukutsha kakhulu
Ukusezela umsi, ukutya okugabileyo, ulwelo, okanye iigesi eziyingozi ezinje ngechlorine, okanye ukurhaxwa kufutshane
Ukugqithisa iziyobisi, ukutofelwa kaninzi, okanye ukonzakala kwemiphunga kutofelo-gazi
Zithini iimpawu kunye neempawu ze-ARDS?
Iimpawu kunye neempawu zihlala ziqala kwiiyure ezingama-72 emva kokonzakala emiphungeni. Unako ukufumana oku kulandelayo:
Ukuphefumla kancinci kunye nengxolo xa uphefumla
Ukukhawuleza, ukuphefumla okunzima kunye nentliziyo ebetha ngokukhawuleza
Ulusu olumanzi olunombala oluhlaza
Ukudinwa okugqithisileyo kunye nokudideka
I-ARDS ifunyaniswa njani?
Uvavanyo lwegazi ingabonisa ukuba unesifo.
Uvavanyo lweegesi zegazi ikwabizwa ngokuba yiarterial blood gas, okanye iABG. Igazi lithathwa kwimithambo (yegazi) kwaye livavanyelwe inani leoksijini kunye nekhabhon diokside. Iziphumo zinokuxelela ababoneleli ngezempilo ukuba imiphunga yakho isebenza kakuhle kangakanani.
Isifuba x-ray okanye i-ultrasound inokwenziwa ukukhangela imiphunga yakho kunye nentliziyo. Ababoneleli ngezeMpilo banokusebenzisa i-x-ray ukujonga iimpawu zosulelo, ezinje nge-pneumonia. I-x-ray yesifuba ingabonisa iimpawu ze-ARDS.
Iskena se-CT ingabonisa unobangela we-ARDS yakho. Unokunikwa ulwelo olwahlukileyo ukunceda ingxaki ibonakale ngcono kwimifanekiso. Xelela umboneleli wezononophelo lwempilo ukuba ukhe waba negazi xa kuthelekiswa nolwelo.
I-ARDS iphathwa njani?
Unobangela we-ARDS kufuneka anyangwe. Uya kulaliswa kwigumbi labagula kakhulu eliza kunyanyekelwa esibhedlele. Unokufuna oku kulandelayo:
Umatshini wokuphefumla Ngumatshini oya kukuxhasa ukuphefumla kwakho kwaye unike ioksijini ngelixa imiphunga iphola. Uya kuba ne-endotracheal tube (ET tube) emlonyeni wakho okanye empumlweni eya kuthi incamathele kumatshini wokuphefumla.
Amayeza inokunikwa ebangela ukuba izihlunu zakho ziphumle kwaye zivumele umoya ukuba usebenzele wena. Unokunikwa amayeza ukunyanga usulelo okanye ukuthomalalisa iintlungu. Ungadinga iyeza lokucoca igazi ukukhusela ukubola kwemiphunga (igazi elijiyileyo emiphungeni yakho). Amayeza ngamanye amaxesha anikwa ukunciphisa ukudumba emiphungeni nakwamanye amalungu omzimba.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-albuterol inhaler
Zithini iziyobisi ze-lsd
ukusebenzisa nini ukuthobela okungagqibelelanga
iziphumo ebezingalindelekanga ze-micardis
zithini iziphumo ebezingalindelekanga zerisperdal
Ixabiso lesisombululo se-brimonidine tartrate ophthalmic